Samsung Galaxy S Wifi 5.0 စမ်းသပ်မှု (၁) Androidsis
ဒီထဲမှာနာမည်တွေဖြင့် cachibache မပျောက်ပါဘူး အကြောင်း Samsung Galaxy S Player Wifi 5.0 tdi, un မီဒီယာဖွင့်စက် ကို Android အခြေပြုကိုရီးယားအမှတ်တံဆိပ်မှ။ ဒီပထမပိုင်းမှာငါတို့အကြောင်းပြောကြတယ် terminal ၏ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအစိတ်အပိုင်းနှင့်၎င်း၏အစိတ်အပိုင်းများ။
အထင်ရှားဆုံးသောအကြောင်းပြောခြင်းဖြင့်စတင်ကြပါစို့ အတိုင်းအတာ။ ဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုအစီအမံအတွက် device ကို 141 × 78,2 × 11,9mm, အရာကအလွန်ကြီးစွာသောစေသည်။ ၎င်းသည် Galaxy Tablet7as ကဲ့သို့သောတက်ဘလက်၏အရွယ်အစားကိုမရောက်ရှိနိုင်ပါ။ လက်ကိုင်ဖုန်းများပေါ်တွင်မူ Desire HD အရွယ်အစားရှိနေသည်။
La pantalla သင့်ရဲ့အများကြီးယူထားသော ရှေ့အနက်ရောင် အရာ, ထို gadget က၏အရွယ်အစားကဲ့သို့ကြီးမားသည်။ မျက်နှာပြင် ၅ လက်မ TFT-LCD နှင့် resolution ကို 800Hz မှာ WVGA (480x68pixels)။ ဤဖန်သားပြင်အရသင်သည်အကြောင်းအရာအမျိုးမျိုးကိုကြည့်ရှုခြင်းနှင့်လက်နှစ်ဘက်စလုံးမှကီးဘုတ်ပေါ်တွင်စာရိုက်ခြင်းပင်ပြproblemနာမရှိပါလိမ့်မည်။ ၎င်းကိုမည်သည့်မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင်မဆိုပြန်လည်ထားရှိပါကသင်သည်လက်နှစ်ချောင်း အသုံးပြု၍ လက်တစ်ချောင်းစီယူနိုင်မည် touchscreen ရှိ QWERTY ကီးဘုတ်၏အားသာချက်။ Screen အောက်ရှိ button panel သည် Samsung Galaxy S နှင့်အတူတူဖြစ်သည် ဘယ်ဘက်ရှိမီနူးခလုတ်၊ ညာဘက်နောက်ဘက်ခလုတ်၊ ထိတွေ့နိုင်သောပစ္စည်းများနှင့်အိမ်အတွက်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဗဟိုခလုတ်နှစ်ခုလုံး.
ရှေ့ဖက်တွင်၊ နားကြပ်တည်ရှိသည့်နေရာအပြင်အပြင်တွင်၎င်းရှိသည် ရှေ့ကင်မရာ VGA ဒီအပိုင်းကိုအတော်လေးပြည့်စုံစေတဲ့ဗွီဒီယိုခေါ်ဆိုမှုတွေမှာအသုံးပြုနိုင်တယ်။
ထဲမှာ ကျော တစ်ဦးနှင့်အတူ ကွက်လပ်အလွတ် အလွန်လှပသည်၊ CE နှင့် FCC တံဆိပ်များ၊ Samsung နှင့် Galaxy မိသားစုတို့၏အမှတ်တံဆိပ်များအားလုံးကိုဖတ်ရှုခြင်းအပြင်ကျွန်ုပ်တို့တွင်လည်းရှိသည် ကင်မရာ၊ ဤအမှု၌ 3.2MPx ရှိသည်အားလုံးမကောင်းတဲ့မဟုတ်ပါဘူး။ 5MPx ရှိရင်ဒီပစ္စည်းကပြီးပြည့်စုံသွားမှာပါ။ ဒါပေမယ့်စျေးနှုန်းအရ hardware ကအနည်းငယ်ပိုပြီးကန့်သတ်ထားရမယ်။
ငါတို့သည်လည်းရှိ ဖုန်းတွင်ပါဝင်သောစပီကာနှစ်ခုအတွက်အပေါက်နှစ်ခု သူတို့ကမင်းကိုအာမခံပေးတယ် အသံစတီရီယို လူအများမဝါကြွားနိုင်၊ ပါဝါအနည်းအကျဉ်းသာရရှိနိုင်ရန်တတ်နိုင်သမျှအသံကောင်းကောင်းရှိသည်။
terminal ၏အစွန်းတွင်၊ အခွံနှစ်ခုကိုခွဲထုတ်ရန်ငွေခြည်ခြင်းနှင့်အတူကျွန်ုပ်တို့တွင်ရှိသည် အသံအတိုးအကျယ်အတွက် keypads၊ ပိတ် / ပိတ်ရန် နှင့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဆက်သွယ်မှုများ, ချစ်သူ အားသွင်းခြင်းနှင့်အောက်ပိုင်းအစိတ်အပိုင်းအတွက်ဒေတာလွှဲပြောင်းသည်နှင့် 3.5mm jack ကို အပြင်ဘက်နားကြပ်တွေအတွက်ပါ။ အင်တာနက်မက်ဆေ့ခ်ျပို့ခြင်းဖြင့်ခေါ်ဆိုမှုများတွင်၎င်းကိုအသုံးပြုနိုင်ရန်လည်းအောက်တွင်ဖော်ပြထားသည်။
ထိပ်မှာငါတို့ရှိသည် microSD ကဒ်အထိုင်။ ဒီကစားသမားရှိပါတယ်နေစဉ် internal memory 8GB (ကျွန်ုပ်တို့၏ multimedia ဖိုင်များကိုသယ်ဆောင်ရန် 5Gb ကိုသုံးနိုင်သည်၊ ကျန် ၃ ခုသည်ပရိုဂရမ်များနှင့်လည်ပတ်ရေးစနစ်အတွက်ကျန်သည်) ကဒ်ပြားများကို 32GB အထိ သုံး၍ မှတ်ဉာဏ်ချဲ့ပါ။
အကယ်၍ ၎င်းသည်ယူဆောင်လာသည့်ဟာ့ဒ်ဝဲကိုဆက်လုပ်ပါက၊ Snapdragon ARMv7 rev2 ပရိုဆက်ဆာ၊ 1GHz အမြန်နှုန်း။ ကံကောင်းထောက်မစွာ RAM ကို 381MB ယူဆောင်လာသည်သူတို့ဖုန်းတစ်ခုအတွက် Android လုပ်ငန်းစဉ်အားလုံးနှင့်အလုပ်လုပ်စရာမလိုသည်ကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားခြင်းကကျွန်ုပ်အတွက်လုံလောက်ပုံရသည်။ ပုံမှန်အသုံးပြုမှုဖြင့် 100MB ထက် ပို၍ သုံးစွဲရန်ရှားပါးသည်။
အားလုံးတပ်မက်လိုချင်သောအဆက်သွယ်မှု။ Wifi B / G / N၊ ဘလူးတုသ်၊ GPS၊ ရွေ့လျားမှုအာရုံခံကိရိယာနှင့် FM ရေဒီယို။ MP4 ကစားသမားတစ်ယောက်အတွက်တော့အဲဒါဟာလုံးဝပြီးပြည့်စုံတယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်။
နောက်ဆုံးတော့ ဘက်ထရီ၏စွမ်းရည်ရှိပါတယ်သော 2500mAh။ Samsung မှသူတို့သည်၎င်းကိုထုတ်လုပ်နိုင်စွမ်းရှိကြောင်းအာမခံသည် ဗီဒီယို ၈ နာရီနှင့်ဂီတ ၆၀ နာရီ, ဒါကအိမ်အပြင်ဘက်မှာသုံးနိုင်ဖို့ဒီခရီးဆောင်ကစားသမားအတွက်အပိုအချက်တစ်ခုပေးသည်။ ကျွန်တော်သူနှင့်အနည်းငယ်သာဆက်သွယ်မှုတွင် WiFi နှင့်ထိတွေ့ခြင်း (ဖန်သားပြင်ပေါ်) သည် ၈ နာရီနှင့်သေချာသည်။ သို့သော်လည်းငါသည်၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ကိုပိုမိုနှံ့နှံ့စပ်စပ်စမ်းသပ်ဖို့ရှိသည်။
ဟာ့ဒ်ဝဲကိုဤအပိုင်းတွင်မိတ်ဆက်ခဲ့ပြီးဆော့ဖ်ဝဲနှင့်အသုံးပြုသူအတွေ့အကြုံများကိုစက္ကန့်အနည်းငယ်ကြာအောင်ထားခဲ့သည်။ ဒီပလေယာနဲ့အတူ Samsung က Apple iPod Touch ကိုအောင်မြင်စွာရပ်တည်နိုင်ခဲ့သည်။ တစ်ချိန်တည်းမှာအလွန်ဆင်တူသောကွဲပြားခြားနားသောအယူအဆနှစ်ခု, ဤသည် Android မှာ, သင်တန်း၏။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » NOTICIAS » reviews » Samsung Galaxy S Wifi 5.0 စမ်းသပ်မှု (၁)
စျေးနှုန်း? USA တွင်သို့မဟုတ်မက္ကဆီကိုတွင် tmb ဖြစ်သည်
ငါ့ကိုကူညီနိုင်မလား? ငါဒီကစားသမားကိုဝယ်ပြီးဖြစ်ရပ်တစ်ခု (သို့) ကိစ္စတစ်ခုအတွက်ဝဘ်မှာရှာနေပေမဲ့ကံမကောင်းဘူး။ တစ်ခုခုရှာတွေ့ဖို့ငါ့ကိုအကြံပေးလို့ရမလား?
ဒီကွန်ပြူတာမှာ android system နဲ့ဂိမ်းကစားလို့ရမလားလို့မေးချင်တယ်။ သူကကစားသမားလို့မေးတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒါကိုမှတ်ချက်မပေးခဲ့ဘူး၊ ဒါကငါလိုတာတစ်ခုတည်းမဟုတ်ဘူး။ ဝယ်ဖို့သိတယ် .... ကျေးဇူးပြု၍ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ဒီအဖွဲ့မှာပါတဲ့ဂိမ်းတွေဒီဂိမ်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဗီဒီယိုတွေဘယ်တော့မှမပြောပါဘူး။
အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ! လွန်ခဲ့သော ၂ ပတ်ကစပိန် FNAC ဝက်ဘ်ဆိုက်တွင်ယူရို ၂၄၉ ပါ ၀ င်ခြင်းအတွက် ၀ ယ်ခဲ့သည်။ ဂိမ်းများ၊ ဂိမ်းများကိုနားထောင်ပြီးရုပ်ရှင်ကြည့်တယ်။ ယခုကျွန်ုပ်ထင်မြင်သည်မှာ၎င်းသည်၎င်း၏အရည်အသွေး / သယ်ဆောင်နိုင်မှုအချိုးအစားတွင်ပြီးပြည့်စုံသောကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည်။ အင်တာနက်ဆက်သွယ်မှုနှင့်ပတ်သက်လျှင်၊ သင့်တွင်နေရာတိုင်းနီးပါး၌ Wi-Fi ကွန်ယက်များရှိသည်။ သို့သော်သင့်တွင်တစ်ခုမရှိပါကကျွန်ုပ်သည် Player ကိုမိုဘိုင်းနှင့်ချိတ်ဆက်ထားခြင်းဖြင့်ပြသခြင်းမရှိဘဲပြသခဲ့သည်။
Jorge ကိုအဖြေပေးခြင်း - ဟုတ်တယ်၊ သင်လိုချင်တဲ့ android application များနှင့်ဂိမ်းများကို install လုပ်နိုင်သည်။
Mmr အားတုံ့ပြန်ခြင်း။ ကျွန်ုပ်သည်ကောင်းမွန်သောအမှုတစ်ခုကိုလည်းရှာဖွေနေသည်။ ယခုအချိန်တွင်ကျွန်ုပ်သည် 6” ebook ဖတ်ရှုသူများအတွက် Case Logic ကိုအသုံးပြုသည်။ ငါ Player ကိုနှင့်နားကြပ် fit မှအတွင်းပိုင်းအပေါ်မြှုပ်တင်ခြင်းအားဖြင့်ကအဆင်ပြေအောင်ပါပြီ။ Noreve ကဒီမော်ဒယ်အတွက်အဖုံးတစ်ခုကိုထုတ်ပေးမလားဆိုတာငါစောင့်ကြည့်နေမှာပါ၊ ဘာလို့လဲဆိုတော့ငါအရင်ကသူတို့ကိုဝယ်ဖူးပြီးသူတို့ရဲ့ထုတ်ကုန်တွေအရမ်းကြိုက်တယ်။
၎င်းကိုမြို့သို့မဟုတ်အဝေးပြေးယာဉ်မောင်းများအတွက် GPS လမ်းညွှန်တစ်ခုအဖြစ်သင်ကြိုးစားခဲ့ပါသလား။
ဟုတ်ကဲ့, sygic အတူ။ ဒေတာမရှိတဲ့အတွက် GPS ကို Offline ဆွဲရမှာဖြစ်ပေမယ့်ဇိမ်ကျပါတယ်။ Android အတွက်ဘရောင်ဇာအတော်များများရှိတယ်၊ ဒါကအရသာကိစ္စပြီးပြီ
Mmr, ငါအဖုံးကိုလည်းရှာနေဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့နေရာတိုင်းရှာဖွေပြီးရှာဖွေနေပြီးနောက်ရှာတွေ့တစ်ခုတည်းသောအရာကဒီ website ဖြစ်ပါတယ်:http://shop.ebay.com.au/i.html?_kw=samsung&_kw=galaxy&_kw=S&_kw=wifi&_kw=5.0.Si တစ်စုံတစ် ဦး ကအခြားမည်သည့် website ကိုသိတယ်, ဒါကြောင့်ဖော်ပြရန်တန်ဖိုးထားလိမ့်မည်။
Leonardo နဂါးငွေ့တန်းကစားသမား ဟုသူကပြောသည်
မင်္ဂလာနံနက်ခင်းပါ! အဖုံးများနှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများကိုမူစက်တင်ဘာလတွင်စတိုးဆိုင်အားလုံးတွင်ရရှိနိုင်လိမ့်မည်။ သူတို့ကဖုန်းအိမ်မှာစလိမ့်မယ် ... နှင့်ကျန်စတိုးဆိုင်များတွင်ပိုမို tarfe ။ နှုတ်ဆက်ခြင်း
leonardo galaxy player ကိုပြန်ပြောပါ
ငါဒီပစ္စည်းကို ၀ ယ်ဖို့စဉ်းစားနေတယ်၊ ​​ငါသံသယက4"ဒါမှမဟုတ် 5" လား။
ငါ5»ကိုပိုကြိုက်ပါတယ်၊ ဒါပေမယ့်မင်းရဲ့အိတ်ကပ်ထဲမှာသယ်ဖို့မလွယ်ဘူး
ငါပီရူးကပါ။ Wong ဆိုင်တွေမှာရတယ်။
ကားလို့စ် P ဟုသူကပြောသည်
ငါဟာ Wong မှာရှိတဲ့ Galaxy5in ကိုရောင်းတော့မယ်။
Carlos P ကိုပြန်ပြောပါ
မင်္ဂလာပါ taperwever ကျွန်ုပ်တွင် ၅ have ရှိပြီး၎င်းသည်သင့်အိတ်ကပ်အတွက်ကြီးမားသောအရာတစ်ခုဖြစ်သော်လည်း၎င်းသည်အလွန်ကောင်းမွန်သည်။ ၎င်းသည်အလွန်အဆင်ပြေသောအရွယ်အစားဖြစ်သောကြောင့်ခဲတံအသုံးပြုရန်စိတ်ပူစရာမလိုတော့သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ အရာအားလုံးသည်သင်၏လက်ချောင်းထိပ်တွင်ရှိသည်။ .. 🙂
၎င်းတွင်ချို့ယွင်းချက်တစ်ခုရှိပါက Skype ရှိဗီဒီယိုခေါ်ဆိုမှုများအတွက် VGA ရှေ့ကင်မရာကို အသုံးပြု၍ မရပါ။ သို့သော် Qik နှင့်အတူအလွန်အံ့သြဖွယ်ကောင်းပြီးကစားသူအတွက်ခလုတ်အချို့မပါရှိပါက၊ သင့်တွင် Bluetooth နားကြပ်များမရှိလျှင်၎င်းကိုလုပ်ရန်နှောင့်အယှက်ဖြစ်နေသည်။ မျက်နှာပြင်သော့ဖွင့်ရန်တက်ဘလက်ကိုဖယ်ရှားပြီးနောက်သီချင်းကိုပြောင်းပါ။
ဟေးပေါလိုဘယ်ကလဲ Samung galaxy player ကိုဘယ်မှာဝယ်ခဲ့တာလဲ။ လေးစားပါတယ်
ငါ Skype မှာဗွီဒီယိုခေါ်ဆိုမှုလုပ်တယ်၊ ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့သူတို့ gingerbread အတွက်လုပ်ဆောင်ချက်အချို့ကိုဖျက်သိမ်းတဲ့ Skype update ရှိလို့ဖြစ်တယ်၊ အဲဒါကငါမွမ်းမံဘူး၊ ဒါကြောင့်ဗွီဒီယိုခေါ်ဆိုမှုတွေကိုငါဆက်လုပ်တယ်။
ငါအဆင်ပြေတယ်၊ ​​အရမ်းကောင်းတဲ့တက်ဘလက်ဖြစ်ပြီးသိပ်မကြီးဘူး .. အိတ်ဆောင်အရွယ် !! ကျနော့်အမြင်ကတော့အကောင်းဆုံးကသင်ကအဲဒါကိုသုံးနိုင်တယ်။ (Teamviewer နဲ့အတူ) Wi-Fi ချိတ်ဆက်မှုနဲ့ဘယ်နေရာမှမဆို pc ကိုစျေးကွက်ကနေအခမဲ့အက်ပလီကေးရှင်းတွေရနိုင်၊ အီးမေးလ်အကောင့်တွေအားလုံးကိုစီမံနိုင်တယ်၊ ဝက်ဘ်ကြည့်နိုင်တယ်။ အလွယ်တကူ၊ ​​အလွန်ကောင်းတဲ့အသံအရည်အသွေးနှင့်အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက် ... အကယ်၍ အပြစ်တင်စရာတစ်ခုခုရှိလျှင်၊ ပီရူးနှင့်အမေရိကရှိဤမော်ဒယ်အတွက်အဖုံးများသို့မဟုတ်ကာကွယ်သူများမရှိသောကြောင့်ရှေ့ကင်မရာကို Skype ဖြင့်မသုံးနိုင်ပါ။
စကားမစပ်၊ နောက်ထပ် ၁၀၀ ထပ်တိုးရန်ငါမှာနောက်ထပ်တက်ဘလက်တစ်လုံးလဲရန်ရှိသည်။ paulolm.953@gmail.com သင်စိတ်ဝင်စားလျှင်သို့မဟုတ်သူတစ်စုံတစ်ယောက်ကိုသိလျှင်ကျွန်ုပ်နှင့်စကားပြောပါ
ကျွန်ုပ်မှာ Galaxy5already ရှိပြီးပါပြီ၊ ချိတ်ဆက်မှုရှိရန်နှင့် Master's Degree of .pdf ရှိစာရွက်စာတမ်းများကိုပြန်လည်သုံးသပ်ရန်စဉ်းစားရန်၎င်းကိုဝယ်ယူခဲ့ပါတယ်။ မနေ့ကသူတို့ကငါ့ကိုဒီဂရီကုန်ကျစရိတ်မှာပါ ၀ င်တဲ့ Ipad2ကိုပေးမယ်လို့ပြောတယ်၊ ဒါကြောင့်ငါ Galaxy ကိုဆက်ပြီးရောင်းမလားငါဆုံးဖြတ်ရမယ်။
Skype အတွက်ရှေ့ကင်မရာကိုအသုံးမပြုနိူင်ခြင်းသည် Motorola Atrix နှင့်လည်းကြုံတွေ့ရသည်။
samsung galaxy wifi 5.0 တွင် 3G ပါရှိသည်
ဘယ်အချိန်မှာမျက်နှာပြင်အကာ, အဖုံးများနှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ။ အဆိုပါ gadget သည်အံ့သြဖွယ်ကောင်းသော်လည်း၎င်းတို့သည်ကုန်ပစ္စည်းများကိုမည်သည့်အထောက်အပံ့မပါဘဲစျေးကွက်သို့တင်ခဲ့သည်ကိုကျွန်ုပ်မသိပါ။ ကျွန်ုပ်၌၎င်းမှာနိုဝင်ဘာ ၁၃ ရက်၊ ၂၀၁၁ ရက်သတ္တပတ် ၁၃ ပတ်အတွတ်ရှိသည်။ ၎င်းအတွက်မည်သည့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းကိုမဆိုသို့မဟုတ်ဖန်သားပြင်အကာအကွယ်၊ အဖုံးများနှင့်မည်သည့်အရာကိုမျှရှာမတွေ့ပါ။ အဲဒါကျိုးနပ်ပါတယ်
မင်္ဂလာပါ၊ မေးခွန်းတစ်ခု၊ ကျွန်ုပ်သည် Samsung Galaxy Player ကို ၀ ယ်လိုသောကြောင့်အလွန်ရှုပ်ထွေးနေသည်။ သို့သော်၎င်းကိုကျွန်ုပ်ဝယ်ယူတော့သည့်အချိန်တွင်ဗားရှင်း ၂ ခုရှိသည် - Samsung Galaxy Wi-Fi2နှင့် Samsung Galaxy ရှိကြောင်းသဘောပေါက်ခဲ့သည်။ S Wi-Fi 5.0, ဒါကြောင့်တစ်ယောက်ယောက်ကငါ့ကိုကူညီနိုင်မယ်ဆိုရင် S ကမပါတဲ့နဂါးငွေ့တန်းနဲ့ကွာခြားမှုရှိရင်၊ ကစားသမားရဲ့နောက်ကျောမှာဆမ်ဆွန်ဂယ်လက်ဆီနဲ့အခြားတစ် ဦး ကပြောတဲ့အတွက်ကျွန်တော်အရမ်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ Samsung Galaxy galaxy player သာဖြစ်သည်။
ရိုဒရီဂို SP ဟုသူကပြောသည်
Rodrigo SP သို့စာပြန်ပါ
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်ကင်မရာတွင်ချုံ့ထားသလားသိလိုပါသလား။ ဖုန်းနဂါးငွေ့တန်း s2ကဘာကြောင့်မဟုတျဘဲရှိပါတယ်?
ငါရှာလို့မရဘူး။ ,,, ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
ဤ GALAXY သည် 3G ဆက်သွယ်မှုမရှိပါက Wifi Wi-Fi မှတဆင့် GPS ဆက်သွယ်မှုကိုအသာထားပါကကျွန်ုပ်အနေဖြင့်ကျွန်ုပ်သည်ကိုစတာရီကာမှတစ် ဦး တည်း ၀ င်ရောက်နေသော GPS နှင့်အချိန်တိုင်းအချိန်ကုန်ဆုံးသော GPS နှင့်၎င်းသည်လိုအပ်သောဆက်သွယ်မှုဒေတာနှင့်ဆက်သွယ်မှုလိုအပ်သည်ကိုပြောပြသည်။
ဖုန်းမှာလုပ်လို့ရမယ့်စမ်းသပ်မှုရှိလား။ သူတို့မှာစက်ရုံစစ်ဆေးမှုလို့ခေါ်တယ်။ ဒါပေမယ့်အဲဒါကိုကျွန်တော်မသုံးနိုင်ဘူး။
ငါ့မှာ gs 5830l Samsung samsung galaxie ace ရှိတယ်။